Abe-comrades belule uhlelo lokuqoqwa kweminikelo - Ilanga News
Home Ezemidlalo Abe-comrades belule uhlelo lokuqoqwa kweminikelo
ABASUBATHI beComrades Marathon ebisuka eThekwini iphelela eMgungundlovu nyakenye.
UKUHLEHLISWA kweComrades Marathon yanonyaka obekufanele ukuba igijinywe mhla ka-14 ku-Nhlangulana (June) isukela eMgungundlovu isongwe eThekwini, sekuphoqe abagqugquzeli balo mjaho ukuqhubeka nohlelo lwabo lokuqoqa imali yokunikela ezinhlanganweni ezintulayo.
Lolu hlelo lokuqoqa imali bekufanele ukuba luvalwe ngalo Mgqibelo esiya kuwona womhla ka-2 kuNhlaba (May).
Lo mjaho ongomunye wemikhulukazi emhlabeni, uhlehliselwe usuku olungaziwa emuva kokuhlasela kweCovid-19 exake umhlaba wonke. Kumanje eNingizimu Afrika silokhu sikhule njalo isibalo sabathelelekayo.
Izinhlangano ezihlomulayo kulolu hlelo lweComrades Marathon, yiCommunity Chest eseMgungundlovu naseThekwini, yiChildhood Cancer Foundation (Choc), yiHillcrest Aids Centre Trust, yiWorld Vision, yiHospice Palliative Care of South Africa neWildlands Conversation Trust.
Uhlelo lokunikela kulezi zinhlangano lubizwa ngeRace4Charity kanti ngesikhathi abagijimi bebhalisela lo mjaho, bayazikhethela nxa befuna ukuba yingxenye yalolu hlelo.
Olunye uhlelo yilapho abasubathi nomphakathi bezibeka ethubeni lokuhlomula unyanyavu lwemoto.
USihlalo weComrades Mara-thon Association (CMA) uCheryl Winn, unxenxa umphakathi nabasubathi ukuqhubeka nokuba yingxenye yalolu hlelo ukuze kusizakale abantulayo.
UCheryl uthi lezi zinhlangano zisiza kakhulu emphakathini. Uthi abeCommunity Chest banikela ngo-R150 000 kwiDenis Hurley, lapho kuhlala khona abantu aba-ngenawo amakhaya. Laba bantu bafakwe njengoba kuneCovid-19.
AbeHillcrest bakhiphe izijumbana zokudla ezingaphezulu kuka-100 kogogo baseValley of 1000 hills ngakwaNyuswa kanti abeWidlands banikele emphakathini waKwaMhlabuyalingana.
Uma ugcine ngokuba khona umjaho wanonyaka, kungenzeka uhaqwe yizinkinga eziningi kwazise ngesikhathi kuqala lolu bhubhane, abasubathi abaningi bebengakazenzi izikhathi.
Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa, wamemezela ukumisa yonke into esikhathini lapho abasubathi bebesaqala belungiselela ukwenza izikhathi zokubamba iqhaza kulo mjaho.
AbeCMA banethemba lokuthi umjaho wabo uzokuba ngoMandulo (September) noma ngoMfumfu (October) kanti ngaleso sikhathi kusuke sekushisa kakhulu kuleli.
URamaphosa ngoLwesine we-thule inkulumo esizweni ebigxile ezigabeni eziwu-5 lapho ethembise khona ukuthi uzozixegisa ezinye izinto. Yize kunjalo ezemi-dlalo zibekwe zaba sesigabeni sokugcina lapho kuyobe sekukhululeke khona yonke into.
Ne-Athletics South Africa (ASA) iyimise yonke imidlalo yayo kuze kudambe isimo.
Previous articleI-WA INIKELE NGESIZUMBULU KUBASUBATHI
Next articleNgeke ithinteke imiholo yabadlali boThongathi FC